'हिलोमा फुलेको कोमल थियौ प्रकाश'
– बीना मगर, पत्नी/खानेपानी मन्त्री
साँच्चै दुखेको मनको पीडा कम गर्ने औषधि बन्थ्यो भने त्यो औषधिको व्यापार कति फस्टाउँथ्यो होला। सोच्छु, ‘जीवन भनेकै उतारचढाव र जोखिम नै जोखिमको अर्को नाम रहेछ। प्रकाश तिमीले हामीलाई छोडेर गएको पनि आज एक वर्ष बितिसकेछ। यो बीचमा छ वटा ऋतुहरु सकिए। सिङ्गो हिउँद र वर्षात्हरु बिते। १२ महिनाले पालो फेर्‍यो, मैले भने अझै मनलाई कन्भिन्स गर्नै सकेकी छैन तिमी यो संसारमा छैनौ भनेर। हाम्रो यादकर क्षणहरु, तिमीले बोलेका शब्दहरु, तिमी हिँडेका बाटोहरु, तिमीले कोरेका हरेक मार्ग चित्रहरु या भनौं तिमीले रचेको सिङ्गो संसार अनि हिँड्दाहिँड्दै आधी बाटोमै छुटेको अधुरो यात्रा र हिँड्न बाँकी लामो यात्रा सम्झिरहें । फेरि सम्झें तिमीले मलाई छोडेको गहन् जिम्मेवारी।
खोई कसरी खोलौं ती स्मृतिका पानाहरु ? आज तिमी गएको ठ्याक्कै एक वर्ष। मेरा भावनाहरु अलि बढी नै तरङ्गित भएका छन्। यादहरु पनि यति गाढा बनेर आएका छन् कि व्यक्त गर्ने कुनै शब्द नै छैन। प्रिय प्रकाश, तिमी यति छिटै जान्छौ भन्ने के थाहा यो दुनियाँलाई ? यदि थाहा पाउँथ्यो त तिमीले पनि माया, सद्भाव र प्रेरणाको अनुभूति जीवनमै गर्न पाउँथ्यौ होला ? तिमी गएको दिन हामी मात्रै रोएनौं, सिङ्गो देश रोयो । सारा नेपालीहरु रोए । तिमी सबैको मनमा बस्न सकेका रहेछौँ । सारा नेपालीले तिमीलाई माया गर्ने रहेछन् । यो कुरा सायदै तिमीले जीवनमा थाहा पाउने मौकै पाएनौ ।
प्रचार हुनुअगाडि दुनियाँले भनेजस्तो, बुझेजस्तो र प्रचार गरेजस्तो हामीमा केही थिएन । तिमी र म मिल्ने साथी थियौं । यो कुरा तिमी र मलाई मात्र थाहा थियो । त्यति बेलासम्म हामी मात्र कमरेड थियौं । प्रेमी प्रेमिका भएकै थिएनौं । यो कुरा दुनियाँले अझै पत्याउँदैन होला । अब पत्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । परिस्थितिले नै हामीलाई प्रेमी–प्रेमिका बनाइदियो । अप्रत्यक्ष रुपमा दुनियाँले नजिक बनाइदियो । प्रेमको अगाडि संसारले हार्छ । तिमीले र मैले हा-यौं कि जित्यौं, त्यसको उत्तर मसँग छैन । तर, हामी सँगै बाँच्ने निधो ग-यौं । हाम्रो नाम जोडेर प्रचार गर्ने सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमलाई धन्यवाद दिँदै हामी दाम्पात्य जीवनमा गाँसियौं ।
बिगार्नका लागि होइन, बनाउनका लागि एक भयौं हामी । प्रेम र युद्धमा भएका सबै गल्ती क्षमायोग्य हुन्छन् भन्ने मान्यतासहित दुवैले गल्ली स्वीकार्ने र निरन्तर अघि बढ्ने निर्णय ग¥यौं । हामी पनि यही दुनियाँका छोराछोरी थियौं, यही समाजमा हुर्केका, बढेका । आम मान्छेमा जस्तै हामीमा पनि मानवीय सीमाहरु थिए । हामीले गल्ती गरेका थियौं एक अर्कालाई प्रेम गरेर । तर, तिमीलाई पाएर म औधि खुसी भएँ । अब तिमीलाई माया गर्ने, सकेसम्म खुसी र सुखी बनाउने सोंच बनाएँ । सँगै बाँच्ने, बाँकी जीवन सँगै बिताउने, आउने चुनौति मिलेरै सामना गर्ने र देश र जनताका पक्षमा निरन्तर लड्ने निधो ग-यौं ।
जीवन राम्रै चल्दै थियो । विवाहपछि हाम्रो जीवनमा सङ्घर्षको रुप फेरियो । अभाव, समस्या, दुःखलाई हामीले नजिकबाट नियाल्यौं । यता अध्यक्षको छोराले करोडौं रुपैयाँ उडायो बनेर प्रचार हुँदै थियो, उता तिमी र म गाँसको जोहो गर्न जागिर खोज्दै थियौं । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पनि नेपालमै छुटेको थियो । त्यसैकारण हामीले केही समय डिपार्टमेन्ट स्टोरमा काम ग-यौं । तलब कम र काम अत्यधिक भएपछि त्यहाँ छोडेर रिर्सोटमा काम गर्ने सोंच बनायौं । तर, त्यहाँ पनि नेपालीहरुको ‘आउ–जाउ’ बढी नै हुने रहेछ । त्यहाँ पनि काम गर्न अप्ठेरो लाग्यो । चाहेको भए नेतृत्वको नाम बेचेर मस्ती गर्न नसक्ने पनि होइन । तर, हामीले त्यसो गरेनौं । आफै काम गरेर बाँच्ने योजना बनायौं ।
मङ्सिर तीन गते तिमीले दुनियाँ छोड्यौ । बुबा, ममी, साना छोराहरु प्रसिद्ध र प्रणव एवं सम्पूर्ण आफन्त आज भावविह्वल छन् । आज परिस्थिति अर्कै छ, राष्ट्रले मलाई जिम्मेवारी थपेको छ । बाचा गर्छु, ‘बाँकी जीवन देश र जनताकै लागि समर्पण गर्नेछु । देशको राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र स्थिरताका लागि तिमीले गरेको त्याग र योगदान सधैं स्मरण गर्नेछु । जस्तो परिस्थितिमा पनि परिवार, देश र जनताको हित भुल्ने छैन ।’ पलपल सम्झनाका साथ अलबिदा प्रिय प्रकाश ।
Tagsप्रकाश दाहाल बीना मगर स्मृति दिवस